तुलसीपुर बजार पुर्ण रुपमा खुल्यो
Home Uncategorized तुलसीपुर बजार पुर्ण रुपमा खुल्यो
By ओपेन्द्र बस्नेत
तुलसीपुर । तुलसीपुर बजार आजदेखि पुर्ण रुपमा खुलेको छ । यसअघि पालो अनुसार खुल्दै आएका पसलहरु आजदेखि पूर्णमा खुलेका हुन् । कपडापसल, फेन्सी, सुनचाँदी, हार्डवयर, सैलुन, खाद्यन्न, बैंकहरु, किराना, जुत्ताचप्पल, होटेल लगाएतका पसलहरु खुलेका छन् । पसलहरु खुलेसंगै सामान किनमेल गर्नेको पनि घुँइचो लागेको छ ।
गएको बुधबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्राललयले तय गरेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर बजार खुल्ला गर्न दिने गरि लकडाउनलाई सहजीकरण गर्दै लैजाने निर्णय गरेको थियो । यसैलाई आधार बनाएर व्यापारीहरुे पसल खोलेको तुलसीपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टोपबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।
‘केहि दिन अघिसम्म खाद्यन्न, बैंक, हार्डवयर, फेन्सी पसल पालो अनुसार बिहान मात्रै खुल्दै आएका थिए ,’ चेम्बरका अध्यक्ष घर्तीले भने–‘ आज देखि त सबै खुलेका छन् । ’ चैत्र ११ गतेदेखि बन्द रहेका पसलहरु आज पुर्ण रुपमा खुलेकाले र मानिसहरुको चहलपहल पनि बढेको अध्यक्ष घर्तीले बताए ।
कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर वस्तुस्थितिका आधारमा पसलहरु खुल्ने भनिए पनि त्यसो गरेको पाइंदैन् । संभावित कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन व्यवसायीक संघसंगठन, स्थानीय सकार र प्रशासनको कुनै समनन्वय विना पसलहरु खुलेको देखिन्छ । घोराहीमा भने आंसीकमा रुपमा बजार खुलेको त्यहाँ सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
भर्खरै प्रशान्त वली - January 19, 2021 0
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - January 19, 2021 0
खेल राजधानी समाचारदाता - January 19, 2021 0
बिचार गम्भीरबहादुर हाडा - January 15, 2021 0
प्रदेश २ एम के माझी - January 17, 2021 0
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - January 14, 2021 0
काठमाडौं । यतिबेला डिजिटल रूपमै प्रारम्भिक चरणको भर्चुअल अडिसन भइरहेको गायनसम्बन्धी रियालिटी सो द भ्वाइस अफ नेपालका कोचहरू चयन भएका छन् । दोस्रो शृंखलाका...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - January 15, 2021 0
प्रदेश ३ प्रशान्त वली - January 15, 2021 0
भविन कार्की - August 20, 2020 0
संखुवासभा । सङखुवासभामा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन सकेको छैन । कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि चार दिन वित्दा पनि उनीहरुको उपचार कहाँ गर्न भन्ने टुंगो...
राजधानी समाचारदाता - June 12, 2020 0
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एन्फाका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष स्वर्गीय ललितकृष्ण श्रेष्ठ फिफा कंग्रेसमा जान नपाउनु नै नेपाली फुटबल...
ओमानको शतप्रतिशत जित
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप लिग–२ त्रिकोणात्मक सिरिजमा ओमानले शतप्रतिशत जित हात पारेको छ । मंगलबार अमेरिकालाई ९२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै...
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ५१ जनामा कोरोना पुष्टि
Breaking News राजधानी समाचारदाता - August 3, 2020 0
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार थप ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रा डा...
Uncategorized दिनेश थापा - January 12, 2021 0
सिन्धुपाल्चोक । नेपाली सेनाले ऐतिहासिक पदमार्ग,कोट,गढी तथा किल्लाहरुको पहिचान तथा त्यसको संरक्षणका लागि सुरु गरेको अभियान अन्र्तगत एकता दिवसको अवसरमा ऐतिहासिक दुगुनागढी क्षेत्रको सरसफाई...
प्रदेश ३ सिबी अधिकारी/रासस - August 3, 2020 0
काठमाडौँ । बन्दाबन्दीको झण्डै पाँच महिनापछि सञ्चालन हुनलागेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानका लागि नेपालका दुईसहित १२ वटा वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएका छन् । नियामक नेपाल नागरिक...
लकडाउनले तरकारीको मूल्य घट्यो
Editor-Picks कौशिला कुँवर - April 24, 2020 0
काठमाडौं । लकडाउनले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य हरियो तरकारीको मूल्य तीन गुणा बढीले घटेको छ । लकडाउन हुनुअघि र अहिले हरियो तरकारीको...
Breaking News एजेन्सी - January 19, 2021 0
नयाँदिल्ली । कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका दुईजनाको भारतमा मृत्यु भएको छ । शनिबार कर्नाटक राज्यमा कोरोना खोप लगाएका ४३ वर्षीय एक बिरामीको मृत्यु भएको हो...
प्रदेश २ राजधानी समाचारदाता - January 13, 2021 0
बिचार डा. प्रकाश बुढाथोकी - January 16, 2021 0